Mangina ny tanàna any Ginea taorian’ny fanonganana, hoy ny mpamaham-bolongana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2008 20:03 GMT
Nanjaka ny savorovoro tany Conakry taorian'ny nampodimandry an'i Filoha Lansana Conte (misy malagasy faly ery manonona anarana hafa saingy tsy soratako etoana kosa izany) sy ny fahombiazan'ny fanonganam-panjakana notarihin'ny Jeneraly Ginieana Moussa Dadis Camara.
Nitondra amim-pangejana mafy an'i Ginea nandritra ny ampahaefatry ny taonjato iray i Conte. Toa tsinjo nihamalemy ny fahefany taona vitsy lasa izao, nandritra ny fotoana nitokanany monina fa lazaina ho mararin'ny diabeta.
Guinea, izay manana mponina 10 arivo arivo, no mpamokatra bauxite betsaka indrindra manerantany. Na dia manana harena ankibon'ny tany tahaka izany aza anefa izy dia mbola iray amin'ireo firenena mahantra indrindra manerantany ihany.
Ny fanontaniana fototra, araka ny filazan'i Le Pangolin, tamin'ny resadresaka nifanaovany tamin'i Serge Michel, mpanao gazety Soisa misahana manokana ny raharaha afrikana, dia ny fahalalana raha nivadika ho ra mandriaka ny raharaha:
“Ratsy dia ratsy toe-draharaha any Ginea. Tsy voatantana nandritra ny taona maro ny firenena. Foana ny toerana eo an-tampon'ny fitondrana. Tsy mitazona ny fahefana intsony ny filoha, fa ny mpanolo-tsaina akaiky izay mifanolosolo mandrakariva no mitantana azy. Potiky ny kolikoly ny firenena.Tsy mba misy ady an-trano tahaka ny any amin'ny firenena Afrikana maro hafa any Ginea, nefa raha jerena ny savoritaka misyany dia tahaka ny nisy ady ihany ny fijery azy. Maro ny trano mirodana ao Conakry renivohitra, tahaka ny efa lao ny fijery ny tanàna. Malalaka ny lalana ho an'ny miaramila. Ny mampanontany tena dia ny fahalalana hoe hivadika ra mandriaka izy ity sa tsia.”
Kapiteny tsy dia fantatra loatra teo aloha no nitarika ny fanonganam-panjakana, dia i Moussa Davis Camara, izay nilaza ny “kolikoly ankapobeny”, tsimatimanota sy tsy fisiana fampiharan-dalàna, fahapotehana tanteraka ny toe-karena ho anton'ny nanafoanana ny governemanta sy ny fampiatoana ny lalampanorenana.
“Tonga eto izahay hikarakara fifidianana filoham-pirenena azo itokisana sy mangarahara izay hotanterahina amin'ny faran'ny volana desambra 2010,” Hoy ny teny fanampin'i Kapiteny Camara. Tamin'ny teny voalohany nataony ho an'ny firenena tamin'ny talata no nilazany ny hisian'ny fifidianana ao anatin'ny roa volana.”
Na izany aza dia niteny ny Praiminisitra Ahmed Tidiane Souare fa mbola eo amin'ny toerany soa amantsara ny governemanta ary eo ampikarakarana ny fandevenana ny filoha.
Mitady ny vahaolana politika tsaratsara kokoa noho ny fanonganam-panjakana kosa i Frantsa, i Etazonia ary ny fiarahamonina iraisam-pirenena hafa.
“Fandikana miharihary ny lalampanorenana gineana ity fakana ny fahefana ity,” hoy ny filazan'ny firaisambe Afrikana.
Ao amin'ny Aminata.com, no itantaran'i Sambégou Diallo ny fisavoritahana sy itaterany fa “tontosa ilay izy”, Moussa Dadis Camara ankehitriny ny filoha fahatelon'ny repoblikan'i Ginea.
“Nandeha nizotra ho any Kaloum ny fiaran'ny filoha sy ny mpiaradia aminy. Tamin'ny telo ora tolakandro ora iraisam-pirenena indrindra tamin'izay. Nisafidy ny hiodikodina manerana ny renivohitra ny mpikambana ao amin'ny vaomiera nasionalin'ny demaokrasia sy ny fampandrosoana, ka nandalo ny tsenan'i Madina, avy eo Dixinn, Coleah, nandalo ny toby miaramila Almamy Samory, (any Kaloum), mialoha ny hizorany ho any Sekhoutoureya, ary avy eo… ny toby miaramila Koundara.
Tokony hiverina ho any amin'ny lapan'ny Colombe (voromailala) ny fiaran'ny filoha sy ny mpiara-dia aminy, taorian'iny matso mahavalalanina iny, hametraka ny kapiteny Moussa Dadis Camara eo amin'ny toerana mampitsamboamboatran'ny filohan'ny Repoblika.”
Raha mitatitra ny gazety fa mitana ny foiben'ny fampielezam-peo sy sary ny mpitarika ny fanonganam-panjakana sady mifehy ny toerana stratejika maro manerana ny tanàna, ny mpamaham-bolongana Gineana kosa miteny fa mangina ny tanàna :
Niteny i Henri Willox :
“Aty amin'ny tanàna manodidina an'i Conakry dia manao ny asany mahazatra azy ihany ny tsirairay, ary mitovy amin'ny mahazatra azy ny fiainana afa-tsy ny mbola mba isian'ny herinaratra satria araka ny mahazatra dia tapaka amin'ny enina maraina izany jiro izany.
Tsy naharenesana feombasy mihitsy nandritra ny alina, ary toa faly kokoa tamin'ny fakana ny fahefana nataon'ny tanora miaramila ny mponina. “
Association des Ressortissants et Sympathisants de Fria (fikambanan'ny mpiavy sy mpankasitraka ny Fria) koa nitatitra ny fanginana voalaza teo :
“Milamina ny rehetra eto Fria, mankany am-piasana toy ny mahazatra ny olona. Misokatra toy ny mahazatra ny fivarotana ary tsy misy ny fikoropahana, na dia misy aza ny olona sasany miantsena ho amin'ny fiaretatory. Eny fa na ny ankizy aza dia nitady ho any an-tsekoly, saingy nalefa nody izy ireo. Any an-tobiny ny miaramila, ary tsy misy andia-miaramila mivezivezy eran'ny tanàna.
Nilaza ny fahafatesan'(ny filoha) ry zareo tamin'ny roa maraina. Niandry ny fatorian'ny olona mihitsy ry zareo hialana amin'ny fivorivoriana an-dalambe. Saingy tsy dia nisy niraharaha loatra izany vaovao izany koa moa. Efa leon'ny krizy eto Ginea sy manerantany rahateo ny olona ka tsy nisy fihoaram-pefy.”
Mba manantena fiovana ny mpamaky Bali de Yeimberein :
“Raha lazaina fohy, tsy maintsy antenaina ny isian'ny miaramila manaja ny rariny ara-piarahamonina, tia fandriampahalemana sy manana vina handray ny fitantanana ny firenena ka hiantoka ny tetezamita hijery ny FANORENANA HATRAMIN'NY FAKANY an'i Ginea ( ny rafi-pahefana, ny fomba fiasany ary ny toetsaina vaovao indrindra indrindra), ary izany rehetra izany dia ao anatin'ny fanajana ny FANJAKANA TAN-DALANA.
Izany no savaravina hiverenan'i Ginea ho ao anatin'ny firenena (milamina), ka hahazoany miverina indray hiara-dalana amin'ny firenena maro hafa.
Notsentsefina tsy nisy toy izany i Ginea, nalaina taminy avokoa ny harena voajanahariny (fambolena, sy harena an-kibon'ny tany), Ahiana tsy ho afa-bela MANDRAKIZAY noho ny DIMAMPOLO TAONA nampiharana ny jadona sy ny soloky natao taminy i Ginea. Hovakain'ny mpitondra rahampitson'ny firenena ve ireto andalantsoratra ireto?”
Mpamaham-bolongna iray faly noho ny nahalasanan'i Conte :
“Lasa ihany ilay mpanao jadona rehefa nitondra 24 taona. Afaka daholo !”
Akom-pahatsapana nosoratan'i JT, mpamaky ny Global Voices iray:
Vita ny aminy ankehitriny. Maty i Conte. Izay izany. Ary izao dia manomboka indray. Manomboka ny asa mafy. Izao no andraisan'ny vahoakan'i Ginea an-tanana ny fireneny sy ny ho aviny. Lasa ilay mpangeja. Aza avela hisy mpanao didy jadona hafa handray ny seza fiandrianany. Am-pitiavana be sy fanantenana ny tsara indrindra ho an'ny vahoakan'i Ginea, JT
Lasan'eritreritra ihany anefa i Alseny Ndiaye raha ny fhetsiky ny Gineana, sy ny Afrikana amin'ny ankapobeny, no mahatonga ny mpitondra azy ireo ho lasa mpanao didy jadona:
“Ny Afrikana amin'ny ankapobeny ary ny Afrikana tandrefana indrindra indrindra, no manana fironana tafahoatra hanindrahindra ny olona eo amin'ny fitondrana ka manao azy ho toy ny andriamanitra. hita amin'ny sehatra rehetra izany. Ao anatin'ny andro iray, ny olona tsotra iray, rehefa tonga eoamin'ny fitondrana, dia jerena avy hatrany ho irak'Andriamanitra ; omena fahefana goavana dia goavana izy, heverina ho manana fisainana mihoatra noho ny an'ny maro, ho olona manana vina. Milaza azy hatrany ny rehetra rehefa misy resaka atao na dia amn-javatra tsy mitombina aza. Heverina fa izy no niavian'ny hevitra tsara rehetra, ny ohabolana rehetra, ny tetikasa rehetra. Eritrereto anie izany filoha zara raha mahay manoratra ny anarany, nefa dia hita tampoka no “mpanoratra” bokina haisoratra, fahendrena na teokarena e!”
Misy ny mpamaky sasany ny gazety Frantsay Le Monde no manahy fa mety hitranga any amin'ny firenena Afrikana hafa izay zavatra mahazo ny firenen'i Ginea izay taorian'ny fahalasanan'ny mpitondra ao aminy’ :
Turgot nilaza ny heviny hoe:
“ny tena zavadoza dia izao zavamitranga (efa tsinjo tsara dieny mialoha) any Ginea izao dia efa tantara miverina tamin'izay nitranga tany Cote d'Ivoire taorian'ny fahafatesan'i Houphouet (tsy misy fanomanana izay mpandimby sy adin'ny mpandova) ary efa milaza mialoha ihany koa izay hitranga amin'ny andro hahafatesan'ny filoha Afrikana hafa: Kamerona (Biya), Gabon (Bongo), Tchad (Deby), ary i Senegal koa aza angamba, rehefa lasa i Wade (na dia lazaina manana fahazarana demaokratika aza ity firenena iray ity).”
Septambra 2020 24 Lahatsoratra